Chinja mavhidhiyo eMKV kuAVI kubva kune yako GNU / Linux distro | Linux Vakapindwa muropa
MKV Iyo vhidhiyo faira fomati yatakatotaura nezvayo kanoverengeka pane iyo LxA blog. Kana iwe uri mushandisi wevhidhiyo yekurodha mawebhusaiti, zvirokwazvo iwe wasangana nerudzi urwu rwefaira ine .mkv yekuwedzera. Zvirokwazvo mumakore achangopfuura yakave inozivikanwa kwazvo uye mavhidhiyo mazhinji uye akawanda ari kuwanikwa mune ino fomati, nekuti ine zvayakanakira, sezvatichazotaura zvino.
Asi MKV haigare iri akanakisa fomati maererano ne compatibilidad. Kana iwe uine piritsi, smartphone, Android TV, PC, nezvimwe, hauzove nedambudziko rakakura, nekuti kune akawanda maapplication kana vatambi vanotsigira mafomati eMKV, senge inonakidza Kodi multimedia centre yatakataura nezvayo yakawanda . Dambudziko ndere patinoshanda neyakadzikwa kana yakadzamirwa sisitimu iyo yakati rebei, senge mamwe maTV, mao optical players, nezvimwewo, izvo zvinongogaro tsigira MPEG kana AVI uye ndipo panoshanduka shanduko.
1 Chii chinonzi MKV?
2 Chii chinonzi AVI?
3 Enda kubva kuMKV kuenda kuAVI
3.1 Shanduko neffmpeg
3.2 Kutendeuka ne mencoder
Chii chinonzi MKV?
MKV kana Matroska ndeye yakavhurika vhidhiyo mudziyo fomati, mafaera ari mune iyi fomati anogona kunge ane ekuwedzera akasiyana, asi inonyanya kufarirwa ndeye .mkv (zvakare .mks, mka, .mk3d,…) sezvatambotaura kare. Inoshanda senge fomati yepasirese yekuchengetedza audiovisual uye multimedia zvemukati senge zvinyorwa zvidiki mumitauro yakati wandei, nezvimwewo, saka usazvivhiringidze nevhidhiyo codec (chimwe chinhu zvakare Ndakaedza muLxA, mutsauko uripo pakati pemidziyo, fomati, uye codec).
Uye zvakare, MKV inokutendera iwe kuti uwane zvakafanana maitiro kune mamwe midziyo yakavharwa seMP4, AVI, nezvimwe, asi yakavhurika sosi pasi peGNU LGPL rezinesi:
Inogona kunge iine imwe kana yakawanda yevhidhiyo uye odhiyo maturu.
Kubvira kweVFR (Variable Framerate).
Yepamberi mashandiro ezvinyorwa zvidiki.
Kubvira kwezvitsauko zvinoverengeka nemamenu mune imwecheteyo faira.
Zvakanaka maficha ekushambadzira.
Y sezvo isiri codec, zvirimo zvinogona kunyoreswa mumhando dzakasiyana dzemodhiyo nemavhidhiyo macodec, uye yakanyatsogadzirirwa kuitirana kumashure, kugadzikana, uye kuwedzererwa kuve nechokwadi cheremangwana rakajeka. Nekudaro, hazvisi pasina zvinokuvadza:
Compatibility, ndiyo imwe yezvipingamupinyi zvekuda kushandura MKV kuita AVI kana imwe fomati. Sezvandambotaura, zvakadzamirwa kana zvakadzamirwa zviridzwa zvemutambi senge mamwe maTV, mp3 maitirwo, anotakurika mp4 vatambi, Optical BD, DVD players, nezvimwe, zvingangodaro hazvizotsigira.
El saizi Saizi yeMKV saizi dzimwe nguva yakakura kwazvo, akati wandei magigabytes, izvo zvinoita kuti zvive zvakaoma kuti ive yakakwana kune nharembozha dzisina hunyanzvi hwekuchengetedza. Imwe yezviitiko apo zvinonakidza kuenda kune imwe fomati.
Chero zvazvingaitika, kune dzakawanda dzimwe nzira dzekushandura.
Chii chinonzi AVI?
Yakagadziridzwa na Microsoft muna 1992, AVI (Audio Video Interleave) zvakare iri odhiyo uye vhidhiyo mudziyo fomati seMKV, asi yakanyanya yechinyakare uye iine zvikanganiso zvakakura zvichienzaniswa neMKV Imwe yadzo ndeyekuti ndeye fomati yevaridzi, uyezve kuti yakagadzirwa kare kare uye nekudaro haina kugadzirirwa nezvimwe zvezvinodiwa izvozvi mupfungwa. SeMKV inogona kushandisa mhando dzakasiyana dzecodec kukodha zvirimo seDivX, Xvid, MP3, AC3, nezvimwe.
Asi kunyangwe paine kukanganisika uye matambudziko atinogona kubuda mufomati yeAVI ine mukana wakakura uye wakakosha zvekuti zvinoita kuti zvese zvinokuvadza zvinyangarike. Ini ndinotaura nezvazvo kugarisanaKubvira pakuve yeMicrosoft fomati, yakapararira uye yatora mukurumbira wakanyanya zvekuti vese vatambi nemidziyo yatinowana ichaenda kuitsigira. Naizvozvo, kana vachizviziva, zvinoreva kuti ingangoita fomati yepasirese uye hatizove nematambudziko.
Enda kubva kuMKV kuenda kuAVI
Kana iwe ukazviwana iwe uri mukukurumidzira kudiwa kwekushandura iyo MKV faira kuva AVI kana kutamba pane chishandiso chisingagamuchire icho kana pane mbozhanhare mbozha kwatinoda kuchengetedza imwe nzvimbo nekuderedza iyo faira, chakanakisa chinhu ndechekuti chinja MKV kuAVI nematanho aya.
Chinhu chekutanga chichava chekutsvaga chishandiso kutibatsira kutendeuka. Kuti uchinje MKV kuva AVI pane dzimwe nzira dzinoverengeka mune yedu Linux distro. Imwe yezvandinoda kuisa (kana tisina iyo) pasuru ffmpeg iyo ine simba kwazvo uye inochinja. Kunyangwe iwe ungafarire mancoder kana winff, mune chero mamiriro ezvinhu iwo ese asingaremi maturusi uye anoshanda kubva kunyaradzo. Sarudza chishandiso chaunonyanya kufarira, uye chiise kubva kuzvitoro kana App Store yeiyo distro yako. Ini ndinoda kushandisa mencoder uye ffmpeg zveizvi, saka ini ndinokuratidza matanho aunoteedzera neaya maviri ...
Izvozvi zvatava nazvo zvakaiswa, tinogona kuzviita neimwe kana imwe neimwe zvisina basa. Semuenzaniso, kana iwe uchida kuzviita uchishandisa zvine simba swiss mauto banga multimedia ffmpeg, rairo yekuita ichave:
Nezve izvi isu takakwanisa kubva kubva kuMKV kuenda kuAVI kuchengeta imwechete codec iyo yaive neiyo yekutanga faira, sezvo isu takaisa kopi mune iyoyo sarudzo. Dai isu taida kuichinja, tingadai takatsanangura imwe codec kubva kune iyo iripo (ona man ffmpeg). Uye kana iwe uchida kuve wakanangana neakafanana kana akasiyana odhiyo nemavhidhiyo macodec, iwe unogona kutarisa iyi mienzaniso yandinokuratidza:
La kurasikirwa panguva yekutendeuka kuchave kushoma. Kana danho iri rapera tichava neyedu faira reAVI rakagadzirwa mudhairekitori kwatiri kushanda.
Kutendeuka ne mencoder
Kunyange zvakadaro mencoder chishandiso chakanaka, Ini ndinoda ffmpeg, asi kuravira mavara. Ndokusaka ini ndichatsanangurawo maitiro. Pane imwe yaiswa, ndinokurudzira kuti ushandise mancoder kuona zvese zvingasarudzwa, sezvo senge yapfuura ine zvakawanda zvingasarudzwa uye zvakaoma. Asi kukupa iwe muenzaniso wekuchinjisa MKV kuenda kuAVI, iwo wekuraira wekuita ndewe:
Sezvauri kuona, pano isu tine yakawedzera codec Xvid vhidhiyo, uye MP3 yeaudio, ine chaiyo bitrate, sezvaungaona mune zvingasarudzwa ...
Ndinovimba iyi dzidziso pakushandura pakati peMKV neAVI yakubatsira, uye iwe unoziva, usakanganwa kuenda makomendi ako, mazano, kana kusahadzika ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Multimedia » Nhanho nhanho dzidziso: chinja MKV kuAVI
Hazvipindirane kutaura kuti iyo yakavhurika sosi yeMKV codec ine kuenderana kwayo kusagadzikana.
Iwo maratidziro acho anogona kuongororwa nechero munhu anoda kugadzira Hardware inoidudzira. Kana musimudziri wehardware akasarudza kusaitsigira, ndiye ari kusarudza kuita kuti Hardware isapindirane neiyo fomati, saka ndiye mugadziri ari kugadzira Hardware nekukanganisa kwekuenderana kune fomati, nekuti fomati haisi iyo iyo iri kudzivirira kuti Hardware inoenderana.
Chokwadi, asi zvandinoreva ndezvekuti neMKV, kana iwe uine materevhizheni mumba mako uine USB yekubatanidza kubatanidza imwe mhando yekuchengetedza svikiro, kana SD kadhi, kana maDVD ma player anogona kuverenga multimedia mafaera, anotakurika vatambi, nezvimwe. ., zvingangodaro zvisingawirirane neMKV zvisinei nekuti yakavhurika zvakadii. Ndozvandiri kureva nedambudziko rekuenderana ...
Izvo zvinoitika ne, semuenzaniso, ext4 uye FAT kana NTFS ... ndeupi anowirirana zvakanyanya? Zvakanaka, zviri pachena ... tingave tichida kana kwete.